Xidiga Paris Saint-Germain Ee Kylian Mbappe Oo Wali Ka Caga Jiidayo Inuu U Dhaqaaqo Real Madrid.
HomeWararka CiyaarahaXidiga Paris Saint-Germain ee Kylian Mbappe oo wali ka Caga jiidayo inuu u dhaqaaqo Real Madrid.
January 10, 2022 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka France, Horyaalka Spain, Suuqa kala iibsiga 0
Weeraryahanka Paris Saint-Germain Kylian Mbappe ayaa laga yaabaa inuu weli diidayo u dhaqaaqida Real Madrid .
Ku guuleystaha Koobka Adduunka ayaa si weyn loo filayaa inuu si xor ah ugu biiro hogaamiyaasha La Liga marka uu dhaco qandaraaskiisa PSG dhamaadka xilli ciyaareedkan.
Mbappe ayaa durba meesha ka saaray rajada uu u dhaqaaqayo Real Madrid bisha Janaayo, inkastoo ay jiraan warar sheegaya in Los Blancos ay isku diyaarineyso inay ku tijaabiso PSG dalab 42 milyan ginni ah .
Si kastaba ha ahaatee, majaladda Faransiiska ee Le Parisien ayaa ku warameysa in Mbappe uu weli ka fekerayo mustaqbalkiisa fog, taasoo keentay in qandaraas cusub uu u saxiixo kooxda Mauricio Pochettino aan meesha laga saarin.
PSG ayaa loo malaynayaa inay qorshaynayso bixitaanka Mbappe ee la filayo, iyadoo weeraryahanka Chelsea ee Romelu Lukaku lagu xamanayo inuu isha ku hayo Parisiens .
Mbappe ayaa dhaliyay 18 gool 17 caawin ah isaga oo ku faanay 26 kulan oo tartamada dhan ah xilli ciyaareedkan laakiin 22 jirkan ayaa bar-baro 1/1 ah la galay Lyon habeenkii axada.